Xiddig Ka Tirsan Manchester United Oo Loo Carbinayay Mustaqbalka Oo Heshiis La Gaadhay Koox Premier League Ah - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaXiddig Ka Tirsan Manchester United Oo Loo Carbinayay Mustaqbalka Oo Heshiis La Gaadhay Koox Premier League Ah
Xiddig Ka Tirsan Manchester United Oo Loo Carbinayay Mustaqbalka Oo Heshiis La Gaadhay Koox Premier League Ah
Mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mustaqbalka wanaagsan Manchester United ee loo carbinayay in mustaqbalka ay hoggaamiyaan kooxda ayaa lagu soo warramayaa inuu shandaddiisa ka xidh-xidhay Old Trafford oo uu kusii jeedo koox kale oo Premier League ah.
Goolhaye Dean Henderson oo Manchester United ay u laylinaysay inuu noqdo ciyaartoyga beddeli doona Dean Henderson ayaa wada-hadallo kula jira kooxda dhowaanta usoo dallacday Premier League ee Nottingham Forest.
25 jirkan oo booska ka cidhiidhsan kari waayey De Gea ayaa doonaya in uu helo boos joogto ah, si uu qayb uga noqon karo xulka qaranka England ee ka qayb-geli doona Koobka Adduunka ee dhamaadka sannadkan lagu qaban doono waddanka Qatar.
Wargeyska The Athletic ayaa xaqiijiyey, in Manchester United ay heshiis la gaadhay Nottingham Forest oo ay amaah ku siinayaan Henderson, hase yeeshee waxay caqabadi ka jirtaa kooxda bixinaysa mushaharkiisa oo toddobaadkii ah £100,000 Gini.
Forest ayaan dhaqaale ahaan awoodi karaynin inay bixiso lacagtan, waxaanay ka baqayaan in haddii ay ogolaadaan inay mushaharkiisa oo buuxa bixiyaan, in taasi xasillooni darro ku keento qolkeeda labbiska oo ay ciyaartoydeedu dalbadaan in iyagana mushaharka loo kordhiyo.
Newcastle United ayaa si weyn loola xidhiidhinayay Jordan Henderson, hase yeeshee waxay Toon dareenkeeda u jeedisay goolhayaha xulka qaranka England ee Nick Pope oo kooxdiisa Burnley ay heerka labaad u dhacday.